10 nzira dzekukudza yako eCommerce bhizinesi pasocial media - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Digital Marketing, eCommerce, Social Media, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji
Nzira gumi dzekukudza yako eCommerce bhizinesi pasocial media
Yemagariro midhiya chikuva uye eCommerce ndiwo mabhaisikopo azvino emaindasitiri. Aya ndiwo matunhu ari kufamba ari kuve anozivikanwa zvakanyanya nekufamba kwenguva. Nekudaro, ikozvino hazvina kukwana kuve evanhu vezvenhau nevateveri vazhinji ve eCommerce Websites. Makwikwi ari kukura nekukurumidza izvo zviri kuita kuti zviome eCommerce Websites kukwezva vateereri. Mumamiriro ezvinhu akadaro, kune nzira dzinoverengeka dzekuti bhizimisi ichadzoka mugwara. Saka, usafunge zvakawanda uye tanga nemazano ari nyore.
1. Penya senyeredzi!
The evanhu vezvenhau network ndiyo sarudzo yepamusoro yechizvarwa chemazuva ano. Sezvo, huwandu hwehuwandu hunogara huri pa evanhu vezvenhau, nekudaro, iwo mukana wakanaka kuti iwe uwane zvinopfuura hafu yemitobvu yako kubva pairi. Kana iwe uchinetseka nezve kugadzira yakasimba evanhu vezvenhau kuvapo ipapo harisi basa rakaoma. Zvese zvaunoda kuti uite kuisa mune imwe nhamburiko uye uone kwainozokusvitsa ipapo. Iwe unogona kutanga nekuisa zvine simba zvemukati nekusvika kune vanotarisirwa vateereri.
2. Vatengi vanoshingaira
Pane zvakawanda online bhizimisi evanhu vezvenhau account iyo iri kuwana 90 muzana yemari yavo kuburikidza evanhu vezvenhau chete. Ivo vari kungotumira zvigadzirwa zvavo, shandisa iyo hashtag chaiyo uye wedzera pane imwe inonakidza kupa (dzimwe nguva) uye kuita kutengeswa. Ikozvino, hapana chikonzero chekuisa zana remadhora pakushambadzira kwechigadzirwa, chaunoda chete evanhu vezvenhau account ine nhamba yakanaka yevateveri uye wobva wagona kuenda. kana iwe uchifunga kuti ipfungwa yakanaka wobva wawedzera zvidzikiso pazviri.
3. Zvinogombedzera zvemukati
Vanhu havanyatso kunyatsoziva simba rezviri mukati. Vanonzwa uye vanotenda kuti haisi nyaya hombe. Nekudaro, kana iwe uri a evanhu vezvenhau anonyanyisa ipapo iwe unonzwisisa kukosha kweiyo yemukati. Iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti zvirimo - zvinyorwa, mufananidzo kana vhidhiyo - ndeyemhando yakanaka ine simba rekukwezva vateereri uye kuwana mukurumbira wakawanda. Pamusoro peizvi, iwe unofanirwa kunzwisisa kukosha kwechokwadi kwechigadzirwa chako, kana chigadzirwa chimwe chete chiripo pane imwe account, zvino zvinogoneka kuti mutengi anogona kusvetuka. Saka, chenjera.
4. Kuteerera munharaunda
zhinji bhizimisi varidzi vanogona kunge vasingazive nezve rondedzero asi ndiyo nzira yekutarisa ye evanhu vezvenhau. Zvinoitwa pahwaro hwekuti chiyero chekukurukurirana chakakwira kusvika papi. Pane huwandu hwematurusi anoshandiswa kuwana iyo rondedzero yezvinyorwa. Kunyangwe Google inopa masevhisi echenjedzo anogona kuratidza rubatsiro eCommerce webhusaiti kuti ugare pamusoro peye yavo indasitiri mutambo. Chimwe chinhu inzira yekuteerera munharaunda. Mune izvi, iwe unofanirwa kunyatsoteerera kune ako vatengi kuti uone yako yakazara nhamba yekutarisa uye kutarisisa.
5. Taura nevateereri vako
Chinhu chinonyanya kukosha kuva nea evanhu vezvenhau account ndeyekuita hurukuro ine hutano uye yakachengeteka nevateereri vako. Ipuratifomu inokupa iwe mukana wekuita neako angangove mutengi uye kuti unzwisise akati wandei mapoinzi anogona kunge ari kudonha kune yako. bhizimisi. Unogona kugamuchira live evanhu vezvenhau kutaura nevatengi vako pa Twitter, Instagram uye Facebook. Uyezve, pane sarudzo yekubatidza Instagram "ndibvunze chero chinhu" chinogona kushandiswa kuve nenguva yekutaura nemutengi wako. Izvi zvinokutendera kuti urambe uchibatana nevanotungamira uye uone kuti uri kuita sei evanhu vezvenhau.
6. Iva nehanya nemwaka
Kana uri on evanhu vezvenhau kana kwete, iwe unofanirwa kunzwisisa kuti jira remvere remvere rinonyanya kugadzirwa kuchando harina kukosha kwezhizha. Saizvozvo, iwe unofanirwa kuve wakanangana nemwaka usati wawana zvibvumirano zvakanakisa. Iwe unogona kunanga mazororo, zviitiko zvakakosha, uye nguva dzemusangano, uye zvichingodaro kuti uwane yako yekusimudzira zano mumutsara. Iyo yakanakisa nguva yekushandura yako inotungamira inguva yezviitiko zvemwaka sezvo paine vangangove vatengi vakagadzirira kusvetukira pakutengesa kwakanyanya.
Kunze kwekunge iri nyaya iri kunyatsonakidza, mutengi haazoverenga zvemukati zvinopfuura mazwi makumi mashanu. Ivo vanozongotanga kubva kuzwi rekutanga uye kana iwe usingakwanise kubata kwavo kwemasekonzi mashanu saka heino unoenda kutengesa kwako. Zvemukati izvo zvauri kushandisa zvinofanirwa kuve zvipfupi uye zvakapfava nenzira yekuti meseji yako yepamoyo iendeswe kumutengi uye ivo vanogutsikana nemhedzisiro. Simply, wedzera mashoma mazwi nezve chigadzirwa, iwo mwero uye maficha uye ipapo iwe wakanaka kuenda. Izvi zvinoshanda kunze kwekunge iwe uri kutengesa yeiyo Picasso muunganidzwa.
8. Regai vagovane
Kana uri kuedza kumhanya an eCommerce bhizimisi wobva waona kuti bhatani rako rekugovana rakabatidzwa. Kana usiri kutendera mutengi kugovera chimwe chinopihwa kana ruzivo nezve chigadzirwa pa evanhu vezvenhau ipapo iwe uchagara wakaganhurirwa kune vanhu vakati wandei. Kana, iwe urikuda mukurumbira, unofanirwa kuvarega vachigovana izvo zvichaita kuti yako post iwanikwe kune yavo rondedzero yeshamwari zvakare. Zvinokwanisika kuti vamwe vavo vachaswedera kwauri uye kunyange kutenga chigadzirwa.
9. Misoro yenyaya dziri kuitika
Ngatitaurei kuti munguva yedhijitari ye smartphone if you are trying to sell off a keypad phone then it is not going to work at all. You need to make sure that you are following the trend in order to attract a maximum audience. This can be done by posting the content that is related to the trend such as latest fashoni revolution, tekinoroji kufambira mberi zvichingoenda zvakadaro. Iwe unofanirwa kutarisa kune icho chigadzirwa chinotengeswa newe uye chengeta iwo maratidziro eanoramba achiitika maitiro kuti uvaenzanise ivo pamwechete. Izvi zvinokubatsira iwe kutumira zvemukati zvinoenderana neyakajairika asi ine mukana wekutengesa.
10. Mutambo we #hashtag
Iyo hashtag yave iyo inonyanya kukosha chikamu che evanhu vezvenhau nyika. Ingave Facebook, Twitter kana Instagram, zviri kuita kuti vanhu vakwanise kusvika kune yakafanana post ine hashtag yakafanana. Izvi zvawedzera kaviri chizvarwa chinotungamira uye kuita kuti vanhu vapinde muhurukuro inoenderera. Zvisinei, mumwe nomumwe evanhu vezvenhau account ine seti yayo yehashtag yepasi mitemo. Semuyenzaniso, Instagram inoshanda zvakanyanya neanopfuura gumi hashtag nepo Twitter yakanyanya kunaka ine chete tag. Nepo neFacebook, ichashanda zvinoshamisa pasina kana hashtag imwe chete.
Zvese zvaunoda kuti uite kuve wakagadzira sezvaunokwanisa. Izvo zvekugadzira uye zvekugadzirisa zvine simba rekukwezva vateereri zvinobudirira. evanhu vezvenhau zvakawanda nezvekutengesa brand yako kana kugadzira zita. Izvo ndezvekunzwisisa mutengi wako uye kuita navo nenzira inobatsira mukuwana kuvimbika kwavo. Saka, mu evanhu vezvenhau fake nyika uko vanhu vasinganetseki zvakanyanya, zvakakosha kuve nekubatana chaiko.